मनछुने भनाइ – नेपाली संगसार
access_time ३१ जेष्ठ २०७८, 6:08 am
१. भगवान मलाइ रुने साहस देउ तर रूहाउने ताकत हैन, अरु रोएको हेर्ने म मा सामर्थ्य छैन किनकी म कयौ पटक रोएको छु र बुझेको छु आँसुको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर । २. माया भन्ने…
access_time ३१ बैशाख २०७८, 6:36 am
१-पग्लिरहेको हिउँ जस्तै बन, आफुलाई पखाल्दै जाउ । २-तिमी ठुलो आवाज मार्फत होइन, शब्दहरु मार्फत बोल किनकि फूलहरु फुल्ने पानीको कारणले हो, मेघ गर्जनले होइन । ३-सफलताको लागि तीन चिज को आवश्यकता पर्छ लगनशिलता, धैर्यता…
access_time २१ फाल्गुन २०७७, 3:14 pm
तपाई जति कम बोल्नु हुनेछ, मान्छे तपाई लाई त्यतिनै धेरै सुन्न चाहने छन । यदि तपाइमा अहंकार र तपाईं धेरै क्रोधित हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई अरू कुनै दुस्मनको आवश्यकता छैन । तपाईं आफैं आफ्नो दुश्मन हुनुहुनेछ…
access_time १३ फाल्गुन २०७७, 12:16 pm
प्रजातन्त्र भनेको जनताको, जनताको लागि, जनताद्वारा गरिने शासन पद्दति हो । मलाई रूख ढाल्न ६ घण्टा देऊ र म पहिलो चार घण्टा बन्चरो उद्याउन लगाउनेछु । मित्र त्यो हो जसको तिम्रो जस्तै समान शत्रु हुन्छ…
access_time २१ माघ २०७७, 7:40 am
जिन्दगी आफैमा यति प्यारो छ कि तर के गर्नु कहिलेकाही अरुको मायाको पनि आवश्यकता पर्दोरहेछ जिउनुलाई! सबैभन्दा पहिला आफुले आफैलाई मायाप्रेम गर ,त्यसपछि मात्र तिमिले सकारात्मक सोचाइहरु ल्याउनु सक्छौ! माया र दयाको अभावमा रहेकाहरुलाई माया…
access_time १८ माघ २०७७, 10:26 am
माया यसरी गर्नु कि त्यहाँ – घृणा कहिल्यै नहोस्! जिन्दगी एक यस्तो खेल रैछ जहाँ खेलाडी त बदलिन्छनै तर खेल चाहिँ चलिरहेको हुन्छ निरन्तर, त्यसरीनै जिन्दगी जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि चलिरहेको हुन्छ! हामी त्यहीँ हौ जुन…
access_time १८ माघ २०७७, 9:51 am
यदी कसैलाई चिन्नु छ भने स्वयम् आफैंले उहीँ ब्याक्तीसंग प्रत्यक्ष संगत गर्नुहोस्, अरुको कुरा सुनेर कसैप्रती धारणा बनाउनु ठुलो मुर्खता हो ! त्यहीँ ब्याक्ती धार्मिक हो, जसले अर्काको निम्ति त्याग गर्नु सक्छ! एउटा साचो मानवले…
जीवनको सानो भन्दा सानो पल पनि मुल्यांकन छन
access_time १८ माघ २०७७, 8:28 am
पहिलो पल्टनै मानीसको बोली र व्यबहारले थाहा हुन्छ उसलाई मनमा सजाउने कि फ्रेममा,आफैं सोच्नुपर्छ! खुसीहरु हराएको हुदैनन् जो खोज्दैमा पाउदैन, खुसीहरु त आफैं भित्र हुन्छ जो चिन्नु सकेमा मात्र पाइन्छ! यदी आफुले आफैंलाई सच्चा प्रेम…
आमा…….यदि भाग्य लेखेने कलम आमाको,…..
access_time १६ माघ २०७७, 2:25 am
यदि भाग्य लेखेने कलम आमाको हातमा भैदिएको भए,….. सायद बच्चाहरुले कहिले दुख पाउने थिएन ,…. [...]Read More...
access_time १२ माघ २०७७, 9:55 am
अनलाइन रिटेल कम्पनी अलिबाबाका चेयरम्यान ‘ज्याक मा’ एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् । उनले ‘वाण्डा ग्प’का रुवाङ्ग जियानलिनलाई पछि पारे । ब्लूमबर्गको इण्डेक्स अनुसार ज्याकको सम्पत्ति २३ बिलियन डलर पुगेको छ । आउनुहोस ,…